“IShedi” yeSitudiyo esiNtofontofo esinemibono engakholelekiyo
Carwell, New South Wales, Australia
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDanielle
Ngena ngaphakathi kwesi situdiyo sihlaziywe ngokupheleleyo kwaye ubungazi ukuba ubumi kwishedi yasefama! Ubunewunewu kulo lonke ujiko olunesitayile esiphuma kwisofa yelinen entle ukuya kwinqwelo yebar yokunyaniseka. Zijike phambi komlilo ovuthayo ocothayo kwaye umangaliswe yimibono emangalisayo, ukhabe umva ngencwadi kwibalcony, okanye usebenzise isitudiyo njengesiseko sokuhlola ingingqi entle yaseRylstone, imizuzu engama-30 kuphela ukusuka eMudgee. Vumela indalo ithomalalise umphefumlo wakho kule ndlela yokuphuma yoxolo neyothando.
Imi kwindawo esebenzayo yasemaphandleni
ipropathi, istudiyo sinoxolo kwaye sizolile. Iimitha ezimbalwa ukusuka kwikhaya eliphambili, unemfihlo epheleleyo enendawo yakho yokupaka kunye nokungena. Abanini banakho okanye bangabikho kwisiza kodwa basoloko beqhagamshelwa ukuba kukho imfuneko yoko. Kusenokubakho ezinye iindwendwe kwikhaya elikhulu.
Ikhitshi elilula elilungele yonke into ngaphandle kokubhaka. IMicrowave, ipleyiti eshushu yokungenisa, itoaster, umatshini wekofu kunye nebbq zonke zisesandleni sakho. Sinikezela ngobisi olutsha, iipod zekofu kunye nesonka sendawo ukuze iindwendwe zethu zibe lula. Nceda ubuze ukuba ungathanda na ukutya okumbalwa efrijini xa ufika okanye ubuze malunga neepleyiti zokungcamla zasekuhlaleni ezikhoyo xa uzicelile.
Indlela yethu yokuqhuba yi-850m ubude kwaye irhabaxa kwaye inamagingxigingxi. Kucetyiswa ukuba uyithathe lula kwaye uqhube kancinci. Ilungele iimoto ezininzi, kodwa ayifanelekanga kwizithuthi eziphantsi kakhulu
I-Rylstone yidolophu entle yembali, indawo entle yokuzulazula kwiivenkile, iikhefi kunye neegalari.
We have lived in the Rylstone district for over 20 years and love to share it with guests.
Nceda ufikelele ukuba uyasidinga, kungenjalo siya kukushiya wedwa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carwell